Adigu haddii aad warkooda la kaashato, waaya Aragnimadaada. maxaa kuu soo baxay?
1.Madaxweynihii 16-aad ee Mareykanka Md.Abraham Lincoln ayaa yiri: Dadka oo dhan waad dhakri kartaa wakhti kooban. Dadka qaarna waad dhakri kartaa wakhti kasta Laakin, Dadka oo dhan ma dhakri kartid wakhti kasta. (F.S:1aad)
2. Qoraa Carbeed ayaa yiri: Wadankeena kuma arkeeysid Tuugada oo Habeenkii korayso Darbiyada Guryaha.Laakin, waxaad ku Arkee Maalintii iyaga oo dhax fadhiyo Xafiisyo waaweeyn. ( F.S: 2aad)
3.Seynis yahankii weeynaa, Albert Einstein ayaa yiri: Aduunyada ma kharibayaan kuwa xumaanta sameeynayo, ee waxaa kharibayo kuwa arkayo xumaanta la sameeynayo, waxbana aan ka qabaneeyn. ( F.S: 3aad)
4.Halgamaagii Africaanka ahaa Mr. P. E. Lumumba ayaa yiri: Musiibada Afrika heeysato waxa ey tahay, kuwa Aragtida wanaagsan Xukunka ma hayaan. kuwa Xukunka haayana Aragti male. Haddii Dadka Africa la siiyo Fursad ey wax ku doortaan mar kale, weli waxa ey u sii codeeynayaan kuwii aan Aragtida leheeyn.( F.S:4aad)
5.Raisul wasaarihii hore ee Ingriska Mr. Churchill ayaa yiri: Haddii aad rabto in aad wax ka ogaato ummad Dunidaan ku nool. Marka hore fiiri, Baarlamaankooda iyo Xildhibaanadooda. Markaas kadib ayaad ogaanee in Shacabkaasu mudan yahay in aad Ubax dul saarto iyo in aad Kabbo ku garaacdo. (F.S: 5aad)
6.Madaxweynihii Mareykanka Mr.J.F. Kennedy ayaa yiri: Lama heshiin kartid Dad ku leh, wixii aan leeyahay, Anigaa iska leh, ee waxa Adigu aad leedahay aan ka wada heshiino. ( F.S: 6aad)
7.Qoraa Carbeed ayaa yiri: Dadka qaar waxa ey u halgamaan in ey ka xuroobaan Adoonsiga. Dadka qaarna waxa ey dalbadaan oo kaliya in shuruudaha Adoonsiga loo hagaajiyo. (F.S: 7aad).
Hadaladaa Anigu ma dhihin, waxaan ka soo ururiyay Raggaa hore. Adigu haddii aad warkooda la kaashato, waaya Aragnimadaada. maxaa kuu soo baxay?